ပရာ့ဂ် နက္ခတ္တဗေဒ နာရီ- ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် လည်ပတ်မှု | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 10/01/2022 09:46 | ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်း၊ မြို့အများအပြားတွင် တမူထူးခြားပြီး ထူးခြားသောအရာများရှိသည်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ပြောရတော့မယ်။ ပရာ့ဂ် နက္ခတ်ဗေဒင်နာရီ. ၎င်းသည် ပရာ့ဂ်၏ အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီး အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော လည်ပတ်မှုတစ်ခုရှိသည်။ 1410 မှာ ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အလုပ်မလုပ်တော့ရင် ကံကောင်းခြင်းတွေ ယူဆောင်လာတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဤဆောင်းပါးတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရာ့ဂ်နက္ခတ်ဗေဒင်နာရီ၏ အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် ၎င်း၏ဇာတ်လမ်းအချို့ကို ပြောပြပါမည်။
3 ပရာ့ဂ် နက္ခတ်ဗေဒင်နာရီ၏ အရေးကြီးသော ရှုထောင့်များ
ပရာ့ဂ်ကို ခရီးသွားနေသလားဆိုတာ ဒါကို ကြည့်ရပါမယ်။ မြို့တော်၏ နက္ခတ်ဗေဒင်နာရီသည် ၎င်းနောက်ကွယ်ရှိ အဓိက ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သေးငယ်သောအရာမဟုတ်ပေ။ ဝတ္ထု သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်အဖြစ်သို့ ကောင်းမွန်စွာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သော ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ဇာတ်လမ်း (နှင့် အစဉ်အလာ) ပါရှိသည်။ Jan Ruze မှ 1410 ခုနှစ်တွင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ 605 နှစ်ကြာခဲ့သည်။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ သူ့ဇာတ်လမ်းမှာ မယုံနိုင်လောက်စရာအသေးစိတ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်၊ သခင်တည်ဆောက်သူကို မျက်စိကွယ်စေပြီး မြို့တော်ကို လုံခြုံစေဖို့အတွက် အချို့သော သာဓုတစ်ခုအနေနဲ့ မြင်ကြတဲ့ ဒီလိုနာရီမျိုး ထပ်မဖန်တီးနိုင်အောင် တားဆီးခဲ့ကြပါတယ်... ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အာရုံစိုက်ထားပါတယ်။ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ လည်ပတ်လုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ နည်းပညာဟာ analog နာရီနဲ့ စနစ်တွေကို နှစ်သက်သူတိုင်းအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိနေပါတယ်။
Prague Astronomical Clock တွင် အခိုက်အတန့်ငါးခုကို တစ်ပြိုင်နက် အမှတ်အသားပြုနိုင်သော အပိုင်းသုံးပိုင်း ဒီဇိုင်းဖြင့် astrolabe ဒီဇိုင်း ပါရှိသည်။ တံခါးပေါက်နှစ်ခုကြားတွင်၊ ထိပ်တွင်၊ တမန်တော်ဆယ့်နှစ်ပါး၏ ရုပ်သေးပြဇာတ်ရုံတစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီသည်မိနစ် ၆၀ တိုင်းတွင်မည်သည့်အချိန်ကိုညွှန်ပြရန်ထွက်သွားကြသည်။ နံပါတ်များသည် နာရီများနှင့် ၁၉ ရာစုမှ ရက်စွဲများထက် ပိုမိုခေတ်မီပါသည်။
အောက်ခြေတွင် လများနှင့် ရာသီများကို သရုပ်ဖော်ထားသည့် ပြက္ခဒိန်တစ်ခုရှိပြီး တစ်နှစ်တာ၏နေ့ရက်တိုင်းအတွက် သူတော်စင်များကို ညွှန်ပြထားသည်။ အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုစလုံးသည် အဖိုးတန်ပြီး အနုပညာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော်လည်း ဤလက်ပတ်နာရီ၏ ရတနာသည် အလယ်ကိုယ်ထည်တွင်ရှိသည်။ ဤအပိုင်းကို 1410 ခုနှစ်တွင် မူလဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
နာရီသည် အချိန်ကို ပုံစံငါးမျိုးဖြင့် ပြောပြနိုင်စွမ်းရှိပြီး ၎င်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ၏ စနစ်သည် စူးစမ်းမှုအရှိဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် elliptic လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်၍ နေကြတ်စက်ဝိုင်းပတ်ပတ်လည်တွင် ရွှေရောင်နေရောင်ရှိသည်။ ဤအပိုင်းသည် တစ်ကြိမ်လျှင် သုံးနာရီပြသနိုင်သည်- ရောမဂဏန်းများတွင် ရွှေလက်၏အနေအထားသည် ပရာ့ဂ်မြို့၏အချိန်ကို ညွှန်ပြသည်။. လက်သည် ရွှေမျဉ်းကို ဖြတ်သွားသည်နှင့်အမျှ၊ ၎င်းသည် မညီမညာသော အချိန်နာရီများကို ညွှန်ပြပြီး နောက်ဆုံးတွင်၊ ဘိုဟီးမီးယားအချိန်အတိုင်း နေထွက်ပြီး နာရီများတွင် အပြင်ဘက်လက်စွပ်တွင် ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအချက်မှာ နေထွက်ချိန်နှင့် နေဝင်ချိန်ကြား အချိန်ကို ညွှန်ပြနိုင်သည်။ ဆယ့်နှစ်နာရီ ခွဲခြားထားသော စနစ်တစ်ခုတွင် စနစ်သည် နေနှင့်စက်လုံး၏ဗဟိုကြားအကွာအဝေးတွင်တည်ရှိသည်။ နေ့သည် ဆယ့်နှစ်နာရီမဟုတ်၊ ညဆယ့်နှစ်နာရီမဟုတ်သောကြောင့် တိုင်းတာမှုများသည် နှစ်အလိုက်ကွဲပြားသည်။ ပထမအကြိမ်သည် နွေရာသီတွင် ပိုရှည်ပြီး ဆောင်းရာသီတွင် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤဗဟိုနာရီပေါ်ရှိ နာရီများကို ပြောဆိုရန်အတွက် ကိုးကားအမှတ်အသားများကို အသုံးပြုကြသည်။
တတိယ၊ နာရီ၏အပြင်ဘက်အစွန်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရွှေ Schwabacher ဇာတ်ညွှန်းဖြင့် နံပါတ်များကိုရေးသည်။ သူတို့က Bohemia မှာလုပ်ခဲ့သလိုပဲ အချိန်ကိုညွှန်ပြဖို့ တာဝန်ရှိတယ်။ နေ့လယ် ၁ နာရီတွင် စတင်ကျင်းပသည်။ လက်စွပ်သည် နေရောင်ခြည်နှင့် တိုက်ဆိုင်ရန် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရွေ့လျားနေသည်။
ပရာ့ဂ် နက္ခတ်ဗေဒင်နာရီ၏ အရေးကြီးသော ရှုထောင့်များ
ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် နေ၏တည်နေရာကို ညွှန်ပြရန် တာဝန်ရှိသော ရာသီခွင်လက်စွပ်၊ ၎င်းမှာ နေကိုလှည့်ပတ်နေသော ကမ္ဘာ၏အကွေ့အကောက်ဖြစ်သည်။ သင်ဟာ ရာသီခွင်ကို နှစ်သက်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်၊ ဤနက္ခတ်များ၏ အစီအစဥ်သည် နာရီလက်တံနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်ကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။ဒါပေမယ့် ဒီအစီအစဉ်အတွက် အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။
ကွင်းများ၏ အစီအစဥ်သည် မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းကို အခြေခံ၍ နေ၏ နေကြတ်ခြင်း လေယာဉ်၏ stereoscopic projection ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထူးဆန်းသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း ဤအစီအစဉ်သည် အခြားသော နက္ခတ်ဗေဒင်နာရီများတွင်လည်း ရှိနေပါသည်။
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ သဘာဝဂြိုလ်တုများ၏ အဆင့်များကို ပြသသော လတစ်စင်းရှိသည်။. လှုပ်ရှားမှုသည် မာစတာနာရီနှင့် ဆင်တူသော်လည်း အလွန်မြန်သည်။ သင်မြင်သည့်အတိုင်း၊ ဤနက္ခတ္တဗေဒနာရီပေါ်ရှိ အဖုအထစ်များအားလုံးသည် ဤဗဟိုချက်တွင် ရှိနေသည်၊ မဟုတ်ဘူး၊ အချို့သော ကိန်းသေများရှိနေသေးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ မပြီးသေးပါ။
နာရီတွင် အလယ်ဗဟိုတွင် ပုံသေအချပ်ပြားတစ်ခုနှင့် သီးခြားအမှီအခိုကင်းစွာလည်ပတ်နိုင်သော အစီအစဥ်နှစ်ခုပါရှိသည်- ရာသီခွင်လက်စွပ်နှင့် Schwabacher ရေးထားသော အပြင်ဘက်အစွန်း။ တစ်ဖန် ၎င်းတွင် လက်သုံးချောင်းပါရှိသည်- လက်၊ အပေါ်မှအောက်ခြေသို့ ဖြတ်သန်းသော နေ၊ ဒုတိယလက်၊ တတိယလက်၊ ရာသီခွင်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကြယ်အမှတ်များပါသော လက်။
ဒဏ္ဍာရီအရတော့ 1410 မှာ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ လက်သမားဆရာက သူ့ကို ကမ္ဘာမှာ ထူးထူးခြားခြားဖြစ်အောင် ထပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာ သေချာစေချင်တဲ့အတွက် ပြောင်မြောက်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
လက်စားချေခြင်း၊ နာရီပေါ်တက်ပြီး သူ့စက်ကိရိယာကို ရပ်တန့်လိုက်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အံ့ဖွယ်နည်းဖြင့် နှလုံးခုန်ရပ်သွားသည်။. ထိုအချိန်မှစ၍ ၎င်း၏လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ၎င်း၏နံပါတ်များကို ကခုန်ခြင်းက မြို့တော်၏ ကောင်းမွန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အာမခံပေးပြီး နာရီသည် အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲ ပရာ့ဂ်ကို ကံဆိုးစေမည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့သည်။
နာရီတိုင်း အချိန်တိုင်းလိုလို၊ သူတို့စုံတွဲရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကို ငြိမ်သက်သွားအောင် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်သွားအောင် ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့ နာရီတိုင်း ရှုံ့ချပြီး ရာနဲ့ချီတဲ့ အဆင့်မြင့် စက်ပြင်မှုတွေနဲ့ လူရာပေါင်းများစွာကို အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ လက်ငင်းအကြောင်းရင်း သို့မဟုတ် တိုက်ဆိုင်မှုမှာ သင်လုပ်ခဲ့သည့် တစ်ခုတည်းသော အချိန်ဖြစ်သည်။ 2002 ခုနှစ်တုန်းက Vltava မြစ်ရေလျှံပြီး မြို့တော်သမိုင်းမှာ အကြီးမားဆုံးရေလွှမ်းမိုးမှုကို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဇန်န၀ါရီနာရီမှ နာရီကို ပြုပြင်ရန် ဆုံးဖြတ်သောအခါ၊ ၎င်း၏ နောက်ထပ် အယူသီးသော အိမ်နီးချင်းများကြားတွင် အထိတ်တလန့် (ဧည့်သည်များနှင့် စိတ်ပျက်စရာ) တစ်မျိုး ဖြစ်ခဲ့သည်။
နာရီတွင် တစ်နှစ်တာ၏လများကိုကိုယ်စားပြုသည့် ဆုတံဆိပ်များပါသော စက်ဝိုင်းပြက္ခဒိန်တစ်ခုပါရှိသည်။ စက်လုံးနှစ်လုံး - အလယ်မှာ၊ အလယ်ခေတ်တွင် အချိန်တိုင်းတာရန် အသုံးပြုခဲ့သော နက္ခတ္တဗေဒ လေးထောင့်ပုံတစ်ခု (၎င်းသည် ဥရောပအလယ်ပိုင်းနှင့် ဗာဗုလုန်ရှိ အချိန်ကာလကို အမှတ်အသားပြုသည့်) ဖြစ်ပြီး အရောင်တစ်ခုစီတွင် အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်- အနီရောင်သည် အရုဏ်ဦးနှင့် နေဝင်ချိန်၊ အနက်ရောင်၊ ည၊ အပြာရောင်၊ နေ့။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း » ပရာ့ဂ်နက္ခတ္တဗေဒနာရီ